Meaningful Breakfast! | The World of Pinkgold
နေ့အိပ်မက် on December 16, 2009 at 7:08 am said:
ပိန်ချင်တဲ့သူတွေက မနက်စာမှန်မှန်စားရတယ်ဆို…. ၀တဲ့သူတွေက မနက်စာမစားလိုက်ရင် ပိုဆာပြီး တစ်နေကုန်စားချင်နေလို့တဲ့… တမီးကျတော့ မနက်စာ စားလည်းမ၀. မစားလည်းမ၀.. !_!
shwezinu on December 21, 2009 at 12:31 pm said:
ဘိုက်မစာရင် အိမ်လည် ထွက်လိုက် ကြော်နံ ညှော်နံ တွေကြောင့် စာလာလိမ့်မယ်နော်
စတာပါဗျာ thank for knowledge
shwezinu on December 21, 2009 at 12:34 pm said:
စံလင်းထွန်း on December 26, 2009 at 4:34 pm said:
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးပါပဲ။
တေဇာ on December 30, 2009 at 2:03 pm said:
ဟေ၇ာင် ပင့်ဂိုး .. ပျောက်လှချည်လား .. ငါ့ဂျီတော့ကို ဘလော့ထားလား … ဂျပု ..